Hafatry ny Eveka Volana Mey 2013 - Fihirana Katolika Malagasy
Hafatry ny Eveka Volana Mey 2013
Daty : 28/05/2013
ZANAHARY Ô ! TAHIO NY TANINDRAZANAY...
DIA HO TANY SAMBATRA ‘LAY MADAGASIKARANAY
Dimampolo taona no nandraisantsika an-tànana ny fiainan’ny firenentsika. Nefa izao ny zava-misy:
Ny harena be miavosa ananan’ny tanintsika dia zary mifangarika amin’ny fahantrana mangeja ny maro amin’ny mponina ankehitriny: Fananana solitany sy harena an-kibon’ny tany maro izay tsy ahodina eto an-toerana hahasoa ny firenena fa zary rembin’ireo mpitrandraka harena iraisam-pirenena. Torak’izany koa lasan’ny vahiny ny tany be velarana misy harena. Moa ve tsy halatra an-karihary voarindra izany? Maro ny mitsoaka amin’ny fandoavan-ketra ary mametraka ny tombony azony any amin’ireny paradisan’ny fanodinkodinam-bola ireny, ka manendaka tsotr’izao amin’ny olona eo an-toerana an’izay loharanon-karena tokony ho azy. Tonga mpiray tsikombakomba amin’ny tombontsoan’ireo vahiny ny mpitondra fanjakana sasany. Ny hafa indray dia tsy miahy afa-tsy izay hiarovana ny fananany manokana fotsiny ihany izay mifandaka amin’ny soa iombonan’ ny fiaraha-monina.
Tsapa ihany koa fa ny tsy fahampian’ny finiavana politika sy ny risi-po ho an’ny tanindrazana ary noho ny fitiavam-bola be loatra no mahatonga ny fitsabahan’ny vahiny amin’ny raharaham-pirenena ka manankorontana. Ny fahefam-panjakana rahateo tsy hita hiaro, tsy hita hanondro, tsy hita hianteherana, satria tsy misy lalàna voahaja hiarovana ny maha-olona sy ny soa iombonana. Mitatao amin’ireo tanorantsika ankehitriny sy ny ho aviny manontolo izany rahomainty izany. Moa ve tsy tandindon’izany ireo andiam-balàla manarona ny antsasaky ny nosy manontolo, izay jerem-potsiny ankehitriny? Am-bavahaona ny firenena!
Fanantenan’ny maro an’isa ny fiovana entin’ny fifidianana izay anehoana ny fiandrianam-pirenena. Avelao mba hiteny amin’izay ny vahoaka ary aza ahodikodina ny safidiny. Mitodika aminareo hilatsaka amin’ny fifidianana isan’ambaratongany izahay. Ny soa iombonana sy ny fikajiana ny maha olona no aoka mba hisongadina amin’ny teny ataonareo sy ny fihetsika asehonareo ny vahoaka amin’ny fampielezan-kevitra hifandimby: halaviro ny lainga sy ny famitaham-bahoaka ary ny firenena. Aza mivarotra Tanindrazana ary mahaiza mitana ny teny nomena: Aza mandraraka ilo mby an-doha.
Ianareo mpanao politika tsara sitra-po, ianareo manam-pahaizana vato nasondrotry ny tany, ianareo “Tandroka aron’ny vozona”ianteheran’ny firenena, ianareo tia Tanindrazana: Velombelomy hatrany ny Soatoavina maha malagasy antsika: tia fihavanana sy mankamamy ny aina ary matahotra an’Andriamanitra. Mitaky fiovam-pitondran-tena sy fiovana fombam-pitantana ary fikojakojana ireo harentsika hahatonga ny firenena ho afaka mizaka tena sy handroso. Mankahery anareo izay milofo hampanjaka izany izahay. Reseo amin’ny soa ny ratsy (Rm 12,21) ho fanavotana ny firenena.
Ianareo tanora solofo dimbin’ny ala: “ny fahakiviana no faharesena voalohany”. Raiso ho ampinga ireo Soatoavina handrafetana olona azo itokisana sy tompon’andraikitra mampijoro firenena vanona. Mahaiza maka lesona amin’ireo zava-misy efa niainantsika teto amin’ny firenena, ka tsy hamerina ny ratsy fa handray ny tsara hoentina hanandratra ambony ny Tanindrazantsika.
Maro ihany koa ireo milofo amin’ny fivavahana, mitodika amin’Andriamanitra satria mino fa tsy misy tsy hohain’Andriamanitra atao (Lk 1,37). Tsy lany hamamiana ny hafatry ny Papa Benoit XVI miantso antsika hihavao ary hivavaka: “Miantso ho amin’ny fiovàn’ny fo, amin’ny fibebahana mandrakariva i Kristy”. (Africae Munus n° 32). Ka indro atolotray aminareo ny vavaka ho an’ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana. Angatahina hatao isam-pianakaviana sy ankohonana ary amin’ny sehatra rehetra ivoriana sy iasana. Ka aoka isika hiara-hivavaka.
Mgr RABEMAHAFALY Fulgence, Arsevekan’i Fianarantsoa
< Hafatry ny Eveka Novambra 2012
Hafatry ny Eveka, Novambra 2013 >